यिनै हुन् आज टोखामा दुवै जना मृ’त फेला परेका दम्पति उमेश र सुदिक्षा ! यस्तो छ कारण – Onlines Time
January 10, 2021 January 10, 2021 onlinestimeLeaveaComment on यिनै हुन् आज टोखामा दुवै जना मृ’त फेला परेका दम्पति उमेश र सुदिक्षा ! यस्तो छ कारण
काठमाडौंको टोखामा दुई जनाको श’व शं’कास्पद रुपमा भेटिएपछि प्रहरीले यसको अनुसन्धान थालेको छ ।
टोखाको ग्राण्डी भिल्ला भित्र ५ नम्बर चोकमा रहेको घर नम्बर २४ डी भित्र शुक्रबार राती बानेश्वरका ३३ वर्षीय उमेश केसी र उनकी पत्नी ३३ वर्षीया सुदिक्षा गिरी मृ’त अवस्थामा भेटिएका थिए । प्रहरी क’न्ट्रोलको फोन नम्बरमा विदेशबाट केहि समयदेखी वि’वाद गरिरहेका दम्पतीले दुईदिनदेखी फोन नउठाएको हुदाँ केहि अप्रिय घ’टना घ’टेको हुनसक्ने आ’शंकासहित प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।